IGCSE Physics Teachers | A4 International Mathematics School ﻿
19.6.2020, Full time , Education / Training
Company: A4 International Mathematics School
A4 International Mathematics School
•	သင်ကြားနိုင်မှုအရည်အချင်းနှင့် ညီမျှသောချီးမြှင့်ငွေကို၊ ခံစားနိုင်စေရပါမည်။
•	လုပ်သက်အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရပါမည်။
•	Part Time/ Full Time လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။
•	CIE Physics Old Papers 2015 - 2019 ကို၊ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးနိုင်ရပါမည်။
Work location Dagon, Yangon
Job posted: 19/6/2020
748 Days, Full time , Education / Training
•	သင်ကြားမူှအရည်အချင်း နှင့် ညီမျ သော လစာခံစားခွင့်ကို ရရှိစေရပါမည်။
PrevIGCSE sciences teachers for Grade 6, 7
•	Must be discuss ICT Old Papers 2015 - 2019 .
IGCSE English Teachers
IGCSE Eco Teacher
•	အရည်အချင်းပေါမူတည်ရ်ျ လစာကောင်းကောင်းခံစားခွင့်ရနိုင်ပါသည်။
•	အလုပ်အ ပေါ်ရိုးးသားကြိုးစားသော သူဖြစ်ရမည်။
IGCSE Information and Communication Technology ICT Teachers
•	Can work part time (or) Full time . •	Must be discuss ICT Old Papers 2015 - 2019 .
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ မရှိစေကာမူသွက်လက်ပြီး ရိုးသားကြိုးစားရ်ျ ရေရှည်လက်တွဲနိုင်သူများ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ •	ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်သင်ကြားပေးနိုင်ရမည်။ •	Training ပေး ...
•	အတွေ့အကြုံနှင့် အရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပီးလစာညိနိုင်းပေးမည်
Mandarin / Spanish Teacher ( Part Time)
•	လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည် •	အတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပီးလစာညှိနိုင်းပေးမည်
•	CIE Old Papers 2015 - 2019 ကို၊ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးနိုင်ရပါမည်။ •	လစာကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ချီးမြင့်ပေးပါသည်။
•	အသက် (၄၀ ) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။
IGCSE Physics Teachers Education, Childcare & Teaching Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon A4 International Mathematics School Education, Childcare & Teaching jobs Education, Childcare & Teaching jobs Education/ Training Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Yangon (Rangoon) 803 Days